Shandad Qalab, Bac Isqurxin, Boorsada Kumbuyuutarka - Camei Ele&Alaabada
bay'ada wax soo saarka
Alaabadayada waxaa inta badan lagu sameeyaa shaqada 2: shaqada soo noqnoqda ee ugu sareysa sida bacaha xereynta, giraanta giraangiraha, boorsada qalin, boorsada qalin, bacda kaydinta; shaqada tolida sida faylalka, jibbaarka, kiish qalin, bacda wax iibsiga, bacda qurxinta, boorsada kombayutarka iwm.
Naqshad xidhitaan sibidhka ballaadhan oo ballaadhan oo khaki ah oo eegaya f...
Kiishka qalin-qoritaan ee Ca-Mei waxaa loogu talagalay in lagu keydiyo...
Naqshad caato ah oo ku habboon daabacaadda moodada ...
Qaab laba jibaaran oo khaki ah oo ku indho-daran daabacaadda moodada...
Muraayad is haysta oo qaab hexagon leh oo leh 2 midab avai...
Muraayadan la isku qurxiyo ee Ca-Mei waxa ku jira polyester ma...
Boorsada PVC-ga ee 3D cad oo cad oo leh ...
Boorsada wax iibsiga ee Ca-Mei waa mid leh qalab PVC ah.
Fashion tassel maqaar la isku qurxiyo kiis la isku qurxiyo...
Boorsadan Ca-Mei ee la isku qurxiyo oo loogu talagalay in lagu kaydiyo laguna...
Shandad yar oo yar oo qurux badan oo 3D unicorn glitter ah oo PVC ah oo leh ...
Boorsada wax iibsiga ee Ca-Mei waxay leedahay PV dhalaalaysa
Kaydinta mesh mesh dhar bag gacmeed wax iibsiga ba...
Shandad wax iibsiga oo fudud, oo ku dhex jirta wada iibsatay...
5 midabo poly shopping bac bea suunka hagaajin karo ...
Shandadan madadaalada iyo indhaha qabadku waxay la socotaa 5 col...
Bac gacmeed oo go'an dhaldhalaalaan caag ah oo hufan h...
Shandadan madadaalada iyo soo jiidashada indhaha ayaa si fiican loo dhisay...
Kaarka magaca jeebka haysta aqoonsiga kiis ganacsi ee credit...
Bacda kaadhka la qaadan karo ee Ca-Mei ee loogu talagalay kuwa w...
Boorsada Quanzhou Camei waxaa la aasaasay 2003, taas oo ah warshado iyo ganacsi ganacsi, oo ku takhasusay horumarinta, wax soo saarka, iibinta bacaha iyo qalabka waraaqaha. Waxaan ka gudubnay shahaadooyinka ISO9001, BSCI, SEDEX, iyo sidoo kale xisaabinta shirkado badan oo caan ah oo ajnabi ah (sida Walmart, Depot Office, Disney, iwm.). Alaabadayada waxaa inta badan lagu sameeyaa shaqada 2: shaqada soo noqnoqda ee ugu sareysa sida bacaha xereynta, giraanta giraangiraha, boorsada qalin, boorsada qalin, bacda kaydinta; in shaqada tolida sida faylalka, jilbaabka binder, kiish qalin, bacda wax iibsiga, bac la isku qurxiyo, bac kombuyuutarka iwm Shirkadeena waxay leedahay madax banaan awoodaha design iyo horumarinta, waxaa jira tiro balaadhan oo ah bacaha waraaqaha, style cajiib ah, tayo sare leh. Loo dhoofiyo dalal iyo gobollo badan sida Yurub, Maraykanka, Japan, iwm. Waxay heleen sumcad aad u wanaagsan caalamka.
Tan iyo markii la aasaasay, warshadeena waxay horumarinaysay wax soo saarka heerka koowaad ee adduunka iyadoo la raacayo mabda'a tayada marka hore. Badeecadahayadu waxay heleen sumcad aad u wanaagsan xagga warshadaha iyo kalsoonida qiimaha leh ee macaamiisha cusub iyo kuwii horeba. Badeecadahayagu si wanaagsan ayaa loo iibiyey gudaha iyo korkiiba, oo ay ku jiraan Yurub, Ameerika, Koonfur-bari, Bariga Dhexe iyo dalal kale iyo gobollo. Waxaan fiiro gaar ah siineynaa siyaasadda maamulka daacadnimada, faa'iidada wadaagga ah iyo macaamiisha marka hore; Shirkaddayadu waxay bixinaysay dadaallo joogto ah si ay u noqoto mid hal abuur leh oo la isku halleyn karo; Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan gacmaha is qabsano saaxiibo kasta oo cusub iyo kuwii hore si aan u dhisno berrito wanaagsan!